Jurgen Klopp oo ku rajo wayn in uusan halis ahayn dhaawaca Adam Lallana… (Miyuu dheeli karaa kulanka Southampton?) – Gool FM
Jurgen Klopp oo ku rajo wayn in uusan halis ahayn dhaawaca Adam Lallana… (Miyuu dheeli karaa kulanka Southampton?)
(Liverpool) 14 Nof 2016 – Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa daboolka ka qaaday in kooxdu aysan wali war ka hayn ilaa xad inta uu la eg yahay dhaawaca Adam Lallana, laakiin waxa uu ku wajo wayn yahay in dhaawaca xiddigan uusan ahayn mid halis ah.
28-sano jirkaan ayaa dhaawac gumaarka ah uga baxay 27-daqiiqo kulankii ay xulkiisa England barbaro 2-2 kula galeen xulka Spain habeen Talaadada garoonka Wembley.
Tan iyo markii uu ku soo laabtay xerada tababarka Melwood Arbacadii, waaxda caafimaadka Reds ayaa qiimeeyey, waxaana wararku ay sheegayaa in aan halis la galin doonin kulanka Sabtida ay Liverpool u safrayso kooxdiisii hore ee Southampton ciyaarta ka dhacaysa garoonka St Mary.
Klopp ayaa maanta shirkiisa jaraa’id kaga hadlay dhaawaca Lallana waxaana uu meesha ka saaray inuu dheeli karo bilowga todobaadkan, laakiin waxa uu caddeeyey inuu dhowaan doono waqtiga uu soo laabanayo, iyadoo laacibkan khadka dhexe uu kaliya maray scan.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in dhaawaca Lallana uu la mid yahay midkii Gumaarka ka gaaray kulankii ay Liverpool 2-1 kaga adkaatay Swansea City bishii la soo dhaafay, kaasoo uu la maqnaa muddo 12-maalmood ah.
"Wuxuu ahaa xarfaankii na dilay sanadkii la soo dhaafay.". Arsene Wenger oo qiray inuu ka cabsanayo Marcus Rashford